TOP NEWS: Maxaa ka jira in agaasimihii warfaafinta madaxtooyada shador hadi xilkii laga qaaday laguna bedelay agaasime cusub? – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Maxaa ka jira in agaasimihii warfaafinta madaxtooyada shador hadi xilkii laga qaaday laguna bedelay agaasime cusub?
by Tifaftiraha K24 20th March 2017 091
Warar ay heleyso somnews ayaa waxa ay sheegayan in xil ka qaadis lagu sameeyay agaasimihii warfaafinta madaxtooyada dowladdii xasan shiikh shador haji.
Shador oo in mudo ahaay agaasimihii warfaafinta madaxtooyada ayaa hada la sheegay in xil ka qaadis lagu sameeyay iyadoona lagu bedelay agaasime cusub.
Agaasimaha cusub ee lagu bedelay shador haji ayaa waxaa lagu magacaaba Cabdinuur Maxamed Axmed waxaana uu ninkaan kamid ahaay ragii ol’oalaha u waday madaxweyne farmaajo markuu ahaay musharax madaxweyne.
Cabdinuur Maxamed Axmed wuxuu farmaajo u qaabilsanaay dhanka warfaafinta xiligii ol’olaha doorashada waxaana hada laga dhigay agaasimaha cusub ee warfaafinta madaxtooyada.
Shador haji isna wuxuu si aad ah ugu dhawaay madaxweynihii hore ee soomaliya mudane xasan shiikh iyadoona ay xusid mudantahay in shador haji uu xasan shiikh sanadkii 2012-kii uu qeybka ahaay dadkii ol’olaha u waday isagoona u qaabilsanaay dhanka saxaafadda waxaana shador lagu dalacsiiyay markii xasan uu madaxtinimada ku guuleestay in laga dhigo agaasimihii warfaafinta madaxtooyada villa soomalia.
Madaxweyne farmaajo ayaa wada isku shaandheyn uu ku sameynaayo shaqaalaha madaxtooyada iyadoona ay xusid mudantahay in madaxweynaha uu is bedel ku sameeyay xubno horay ula soo shaqeeyay xasan isagoona magacaabay xubno cusub sida agaasimiha madaxtooyada oo loo magacaabay Cali Fiqi inkasto fiqi uu xilkaan si KMG ah u haayo waxaana la filaya in madaxweynaha uu goordhaw si rasmi ah ugu dhawaaqo agaasimaha guud ee madaxtooyada.
Daawo: Genaral koofi iyo wafdi uu hogaaminaayo oo maamul goboleed-yada ka socda ayaa gaaray caasimadda rwanda ee kigali
Akhriso:- Ciidamada Ammaanka Putland oo sheegay in ay qabteen Rag looga Shakiyay Alshabaab
War hada ah: Maxaadan Ogeyn oo Caawa Salaadii Maqrib ka dib ka dhacay Dagmada Waabari ee Gobolka Banaadir
Xog aadan Ogeyn+Sawiro : Magacyada Dhalinayarada Soomaliyed ee ku Biiray Daacish iyo kuwa la dilay oo hada la shaaciyay Akhri